ကလိုစေးထူး: ခါဂျီး...၊ ခါဂွေး...၊ ဂါးနီ
အတန်ငယ် မာဆတ်ဆတ်ဟန် လေသံနဲ့ တစုံတယောက်ရဲ့ ခေါ်သံက နောက်နားဆီကနေ ကပ်လျက်ပေါ်လာတာမို့ နောက်ကို ဆတ်ခနဲ ပြန်လှည့်ကြည့်မိတော့ ရှုတည်တည် မျက်နှာထားနဲ့ မျက်နှာဖြူ အမျိုးသမီးကြီး တယောက်...။
`အေ...၊ ဘီ...၊ စီ... ကို မင်းတို့ ဘာသာမှာ ဘယ်လိုခေါ်လဲ´
`ကကြီး၊ ခကွေး၊ ဂငယ်´
မိန်းမကြီးက `ခါဂျီး၊ ခါဂွေး၊ ဂါးနီ´ ဆိုပြီး ကြောင်အမ်းအမ်း လိုက်ရွတ်လျက် သူ့ရဲ့ ဘေး ကန့်လန့်ကာ နံရံသေးသေးလေး ဟိုဘက်ကနေ မျက်လုံး အကြောင်သားနဲ့ လှမ်းငေးနေသည့် ကရင်အကိုကြီးကို `ခါဂျီး... or ခါဂွေး or ဂါးနီ´ ဆိုပြီး တခုခုကို ရွေးချယ် အပြောခိုင်းနေပြန်သည်။ ပြီးတော့ သူ့ဘက်ကို မျက်နှာ ပြန်လှည့်လာပြီး...
`သူ့ဆီကနေ တခုခု နားမထောင်ဘဲ မင်းဘာသာ ဖြေနေတယ်လို့ ငါထင်တယ်၊ ဒီတော့ သူ့ကို ခါဂျီး၊ ခါဂွေး၊ ဂါးနီ တခုခု ပြောခိုင်းပါ´
`အိုကေ´ ဟု ပြန်ပြောလိုက်တော့ မိန်းမကြီးက ဆတ်တောက်တောက်နဲ့ ပြန်လှည့်ထွက်သွားပြီး သူ့အလုပ်စားပွဲမှာ လုပ်လက်စ အလုပ်တွေကို ဆက်လုပ်နေသည်။ ဒါပေမယ့် တချက်တချက်မှာတော့ ဒီဘက်ကို ကွက်ကြည့်ကြည့် လုပ်နေတုန်း...။
DMV (Department of Motor Vehicles) ရုံး...။ ဒီရုံးက အိုင်ဒီကဒ်၊ ဒရိုင်ဘာလိုင်စင်နှင့် တကွ ယာဉ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကို ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ ရုံးတခုပါ။
အမေရိကားမှာ ဒရိုင်ဘာလိုင်စင် လျှောက်ထားဖို့အတွက် အရင်ဆုံး Written test ခေါ် Class D အဆင့်၊ ရေးဖြေ စာမေးပွဲကို အရင်ဖြေကြရသည်။ ရေးဖြေ စာမေးပွဲမှာ ယာဉ်စည်းကမ်းဆိုင်ရာ Signs အမှတ်အသားများအတွက် မေးခွန်းပေါင်း ၁၅ ခု နှင့် အထွေထွေ ဗဟုသုတဆိုင်ရာ မေးခွန်း အခု ၅၀ ဖြေကြရသည်။ မေးခွန်း အပိုင်း နှစ်ပိုင်းလုံးစီအတွက် အနိမ့်ဆုံး ၈၀% ရမှသာလျှင် Learner Permit လို့ မြန်မာအများစု ခေါ်ကြသည့် Instruction Permit ခေါ် သင်မောင်း လိုင်စင်ကို ထုတ်ပေးသည်။ သင်မောင်း လိုင်စင်ရမှသာလျှင် တရားဝင် ကားမောင်း သင်ယူခွင့် ရှိတာမို့ Class D အဆင့် စာမေးပွဲသည် ဒရိုင်ဘာလိုင်စင် ရယူလိုသူတို့အတွက် ပထမဆုံးသော လှေကားထစ် တခု...။
ဒီစာမေးပွဲကို ဖြေဖို့အတွက် သာမန်အားဖြင့် တော်ရုံ အင်္ဂလိပ်စာ ဖတ်နိုင်အားရှိလျှင် ရုံးက ထုတ်ပေးသော ယာဉ်မောင်းလက်စွဲ စာအုပ်ကို လေ့လာပြီး မလွယ်လွန်း မခက်လွန်း ဖြေဆိုနိုင်ပေမယ့် အင်္ဂလိပ်စာ မတတ်သူ မြန်မာတချို့အတွက်တော့ ဒုက္ခနဲ့ လှလှတွေ့သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ တခြားသော ဘာသာခြား စကားတွေဖြစ်သည့် စပိန်၊ ပေါ်တူဂီ၊ တရုတ်၊ ပြင်သစ် ကဲ့သို့ ဘာသာစကားတွေအတွက် ကွန်ပျူတာမှာ အလိုအလျောက် ဘာသာပြန်နှင့်ပြီး ဖြစ်ပေမယ့် မြန်မာဘာသာစကားကိုကျတော့ အဲဒီက စက်တွေမှာ မရှိပါ။
ဒီတော့ အင်္ဂလိပ်စာ အားနည်းသော မြန်မာတချို့အတွက် သင်မောင်း လိုင်စင်ရဖို့အတွက် နည်းလမ်းကတော့ မြန်မာစကားပြန် အကူအညီဖြင့် မေးခွန်းတွေကို ဖြေဖို့ ကြိုးစားရခြင်းပင်...။
သူကိုယ်တိုင်လဲ ဒီစာမေးပွဲကို နှစ်ကြိမ်တိုင်အောင် ကျပြီးမှ သုံးကြိမ်မြောက်မှာကျမှ အောင်မြင်ခဲ့သည်။
အခုတော့ အမေရိကားရောက်လာတာ နှစ်နှစ်ပြည့်စ ပြုလာပြီ ဖြစ်တဲ့ ကရင်အကိုကြီးကလဲ ကားမောင်းလိုင်စင်ကို လိုအပ်လာတဲ့အတွက် သူ့ကို စကားပြန်အဖြစ် ကူညီပေးဖို့ တောင်းဆိုတာနှင့် လူတတ်ကြီး လုပ်ပြီး လိုင်စင်ရုံးမှာ နှစ်ယောက်သား လာဖြေနေကြခြင်း ဖြစ်၏။
လိုင်စင် ရေးဖြေကို စကားပြန်နှင့် ဖြေသူတွေအတွက် ဖြေရမည့် ကွန်ပျူတာခုံနှင့် ကပ်လျက် အခန်းကျဉ်းလေးမှာ အထိုင်ခိုင်းထားသည်။ စကားပြန်သူနှင့် ဖြေရမည့်သူကြားမှာ ကန့်လန့်ကာ သဏ္ဍာန်တခု ခြားထား၏။ ဒီဘက်မှာ စကားပြန်သူက မေးခွန်းကို ဘာသာပြန်ရှင်းပြပြီး ဟိုဘက်က နားထောင်သူက ပြောသော အဖြေကို ကွန်ပျူတာမှာ ဖြေပေးရသည်။ ကက်ဆက်တိတ်ခွေ အသံဖမ်းစက်တလုံးဖြင့်လည်း အသံဖမ်းထားသေးသည်။
ကရင်အကိုကြီးကို ရုံးကို မလာခင်ကတော့ သူက ကြိုပြောထားသည်။
`ကျနော် ဘာသာပြန်တာကို နားထောင်ပြီးရင် စိတ်ထဲထင်ရာ အဖြေတခုခုသာ ပြောချလိုက်၊ ခင်ဗျားပြောတာ မှားလဲ ဒီဘက်ကနေ ကျနော်က အဖြေမှန်ကိုပဲ နှိပ်ပေးမယ်၊ အေ၊ဘီ၊စီ လို့တော့ မဖြေနဲ့...၊ အကြောင်းအရာကိုပဲဖြေ´
ကရင်အကိုကြီးကလဲ ဟုတ်ပြီ ပေါ့။ ဒါနဲ့ နှစ်ယောက်သား တိုင်ပင်ကိုက်ပြီး အလုပ်ဖြစ်နေလိုက်သည်မှာ Signs မေးခွန်းတွေကို အားလုံး မှန်သွားသည်။ လွယ်ကလဲ လွယ်တာကိုး။ အထွေထွေ ဗဟုသုတအတွက် မေးခွန်း ၅၀ စာကို ဖြေရစဉ်မှာတော့ ဖြေပြီးလို့ ဆယ်ခု သာသာလောက်ခန့်မှာပင် သူတို့ နှစ်ယောက် လူလည်ကျနေတာကို ရိပ်မိသွားဟန် တာဝန်ကျ မျက်နှာဖြူ အရာရှိမက အထက်ပါအတိုင်း လာမေးခြင်း ဖြစ်၏။
မိန်းမကြီးက မလှမ်းမကမ်းကနေ ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့် လုပ်နေတော့ စောစောကလို ဟိုလူ့ကို သူလဲ ပြောချင်ရာပြော၊ ကိုယ်လဲ ဖြေချင်ရာဖြေ လုပ်လို့ မရတော့...။ ဒီတော့ တခြားအကြံ စဉ်းစားရသည်။ ထုတ်စမ်း၊ ခေါင်းထဲကနေ ဖြူနီပြာဝါ ဉာဏ်တွေ ... ... ... ...။
ဒါနဲ့ အကြံတခု ရပြီးနောက် ... ... ...။
`အဟမ်း၊ နောက်တခုက ... ... ...´
`အရက်မူးပြေဖို့ အတွက် အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အချက်တွေအထဲက ဘယ်အချက်က အမှန်ဆုံးပါလဲတဲ့။ ကကြီးက သောက်တလွဲ လေကောင်းလေသန့်၊ ခကွေးတော့ ဟုတ်နေပြီ အချိန်၊ ဂငယ် သောက်တလွဲက ကော်ဖီသောက်တာပါတဲ့´
ဟိုဘက်ကလူရဲ့ `ခွီး´ ခနဲ ရယ်သံ တချက်ထွက်လာသည်။ ဒါနဲ့ သူက...
`အကိုရေ အဖြေတခုခု ပြောပါနော်´
စောစောက မိန်းမကြီးက အနားကို လှစ်ခနဲ ရောက်လာပြန်ပြီး ဟိုလူ့နားကပ်လို့ `ခါဂျီးအော် ခါဂွေးအော် ဂါးနီ´ မေးနေပြန်သည်။ ဒါနဲ့ သူက ခပ်သွက်သွက်ပင်...
`အကိုရေ ဖြေရမှာက ကကြီး သောက်တလွဲက လေကောင်းလေသန့်၊ ခကွေးဟုတ်နေပြီက အချိန်၊ ဂငယ် သောက်တလွဲကတော့ ကော်ဖီသောက်တာပါတဲ့၊ တခုခု ပြောပါ´
ဟိုလူ့ဆီက `ခကွေးးးးးး´ ဆိုသော အသံက ခပ်ကျယ်ကျယ်ထွက်လာတော့ ဟိုမိန်းမကြီးကို အောင်နိုင်သော စစ်သူကြီး၏ အပြုံးမျိုးဖြင့် ပြုံးပြလိုက်ပြီး ခကွေး is B in English လို့ ပြောပြီး ခပ်သွက်သွက်ပင် အဖြေမှန်ကို နှိပ်ချလိုက်သည်။
ဒီလိုနှင့် `အမှန်´ `သောက်တလွဲ´ ဆိုတာတွေကို ထည့်ပြောလိုက်တော့ ဟိုဘက်ကလဲ ကကြီး၊ ခကွေး၊ ဂငယ် ဆိုတဲ့ အသံတွေက ပီပီသသ...။ ဒါတောင် တချက်တချက်မှာ သောက်တလွဲလို့ ပြောထားတာကို ဖြေနေလို့ ဟိုမိန်းမကြီး အလစ်ကိုချောင်းပြီး `နောက်တခေါက် ပြန်ရှင်းပြမယ်နော်´ ဆိုပြီး ခပ်တည်တည် ပြန်ပြောရသေးသည်။
အဖြေမှန် ၄၅ ခု...။
အဖြေမှား ၅ ခု...။
ရလဒ် ၉၀% ဖြင့် အောင်မြင်သည်။
နောက်ဆုံး မေးခွန်းတခုကို ဖြေအပြီးမှာ ပေါ်လာတဲ့ စာတန်းကို ဖတ်ပြီး ပင့်သက်တခုကို ဖူးခနဲ မှုတ်ထုတ်လိုက်ပြီး ဟိုဘက်ကလူကို လက်မထောင်ပြလိုက်သည်။
ကျသင့်ငွေကို ပေးချေပြီးနောက် သင်မောင်းလိုင်စင်အတွက် ပြုံးစိစိ မျက်နှာနဲ့ ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံနေတဲ့ ကရင်အကိုကြီးကို လှမ်းငေးနေရင်း စောစောက ဟိုမိန်းမကြီးဆီ ဘာရယ်မဟုတ် သွားကြည့်မိတာ သူကလဲ အမှတ်တမဲ့ ဒီဘက်ကို လှမ်းကြည့်ခိုက်မို့ အကြည့်ခြင်း တချက် ဆုံသွားသည်။ လှမ်းပြုံးပြလိုက်တော့ ခေါင်းတချက်ဆတ်ပြပြီး သူ့အလုပ်ကို သူပြန်လုပ်နေ၏။
အရင့်အရင် ဘာသာပြန်လုပ်ပေးဖူးကြသူ တချို့ကတော့...။
`သတိထား၊ သူတို့ မသင်္ကာရင် ဟို ကက်ဆက်ခွေကို တခြားမှာ သွားပြန်နားထောင်ခိုင်းပြီး ပြန်စစ်တတ်တယ်´
`သူတို့ကို လျှော့တော့ မတွက်ထားနဲ့နော်´
စသဖြင့် သတိပေးကြသည်။ သူကတော့ စိတ်ထဲ သိပ်တော့ မပူလှတော့ပါ။ တကယ်လို့ အစစ်ခိုင်းလဲ ဟိုဘက်မှာ ပြန်နားထောင်မှာက အင်္ဂလိပ်စကားတတ်သည့် မြန်မာသာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ မြန်မာအချင်းချင်းတော့ နားလည်ပေးမည် ထင်ပါရဲ့...။
နားထဲမှာတော့ ဟို မျက်နှာဖြူမကြီးရဲ့ `ခါဂျီး၊ ခါဂွေး၊ ဂါးနီ´ ဆိုသော အသံက မထွက်...။
နောက်ထပ် တခြားသူတွေအတွက် ဘာသာပြန်ပေးရရင်တော့ သူ ဒီထက်ပို သေသပ်သောနည်းဖြင့် လူလည်ကျရပါဦးမည်။
Posted by ကလိုစေးထူး at 7:38 PM
ဟီး ဟီး။ အစ်ကို အဲဒီနည်းအရမ်းမိုက်တယ်။
ha ha....good idea....
Nov 17, 2008, 8:23:00 PM
ဟားဟား... ကကြီး သောက်တလွဲ. ဂငယ်သောက်တလွဲတဲ့...
Nov 17, 2008, 10:06:00 PM
မှတ်သားစရာပဲ.. နိုင်ငံခြားရောက်မြန်မာတွေအတွက် ဖြတ်ထိုးဥာဏ်က တော်တော်အရေးကြီးတယ်ဗျာ။ တခါတလေ ဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ လိုရင်းကို မရောက်နိုင်လို့ ဂွကျကျတွေဖြစ်ရတယ်။ ရသမျိုးစုံအတွက် ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ
Nov 17, 2008, 10:21:00 PM
ကိုကလိုစေးထူးရေ... ဒီနည်းကို မှတ်ထားလိုက်ပြီဗျို့။ သူများတွေကို ကူညီနိုင်အောင်လို့ပါ။
Nov 17, 2008, 10:51:00 PM
ဒါတောင် သူက သောက်တလွဲ ကို တခါတခါရွေးလိုက်သေးတယ်ပေါ့...ဟားဟားဟား
Nov 17, 2008, 11:20:00 PM
ဒါပေမယ့် အဲသည်လို လုပ်ပေးခြင်းကိုတော့ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တယ်၊ မှန်ကန်တယ်လို့ မထင်ပါဘူး။
တကယ်တော့ အဲသည်လို စာမေးပွဲမျိုးမှာ ရိုးရိုးသားသားဘဲ ဖြေဆိုစေချင်ပါတယ်။ မအောင်သေးရင် ထပ်ဖြေပေါ့။
သည်နည်းဟာ မြန်မာစာမေးပွဲတွေမှာ ခိုးချတဲ့နည်းနဲ့ သိပ်မထူးလှဘူး။ ဘာသာပြန်သူအပေါ်မှာ တာဝန်ရှိသူတွေက ထားတဲ့ ယုံကြည်ချက်ကို ချိုးဖောက်ရာလည်း ရောက်နေသလို ခံစားရတယ်။ နောက်ဆိုရင် မြန်မာလူမျိုးဆိုရင် မယုံဘူးဆိုတာတွေ ဖြစ်လာဦးမယ်။
နောက်တချက်က ဒီစာမေးပွဲဟာ ယာဉ်စည်းကမ်းနဲ့ ပတ်သက်တာဆိုတော့ အကျိုးဆက်ကို ရှည်ရှည်ဝေးဝေး တွေးကြည့်ရင် လူတွေရဲ့ အသက်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်မှုနဲ့လည်း ဆက်စပ်နေတာမို့……..ဒီနည်းကို အားမပေးစေလိုပါ။
Nov 17, 2008, 11:22:00 PM
Ko Klo, I have been there and done that in Fort Wayne, IN (it was 10 years ago, though). I felt guilty afterawhile.
I think in the long run, it might benefit all if we encourage them to learn English or study to pass the test instead of cheating with our help :)
It will be good for their future, too. They need to work on their English skills, anyways, if they want to be successful in America.
I don't know much about CA. But in Fort Wayne, they have English classes for newcomers at community centers.
Nov 17, 2008, 11:31:00 PM
အတော်လေးရီရတယ်ဗျာ... ဖြတ်ထိုးညဏ်လေးကလဲ ကောင်းပါတယ်.. ။ ဒါပေမယ့် ရေရှည်အတွက်တော့ ကိုပေါနဲ့ ကိုလွင်မိုးပြောထားတဲ့အတိုင်း ကိုယ်ကူညီရမယ့် လူတွေကိုအတတ်နိင်ဆုံးနည်းမှန်လမ်းမှန်ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးတာက ပိုကောင်းတာပေါ့... ။အမြဲမှန်တိုင်းလဲ ကောင်းချင်မှ ကောင်းတာဖြစ်တဲ့ ဒီလောကကြီးမှ လတ်တလော အခက်အခဲကိုပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းတတ်တာလဲ လိုအပ်တဲ့ စွမ်းရည်တစ်မျိုးပါပဲ..။ :)
Nov 18, 2008, 12:38:00 AM
ဒါပေမဲ့ ကလိုစေးထူးက မြှောက်ပင့်နေကြရင် သိပ်ကိုကျေနပ်နေတတ်သူလေ။
သူက ရေရှည်အတွက် အင်္ဂလိပ်စာသင်ပါလို့ တိုက်တွန်းဖို့အာရုံမရဘူး။
ဒါမှ သူက အမြဲတမ်း အင်္ဂလိပ်စာမတတ်သူတွေရဲ့ရှေ့မှာ ထင်ပေါ်ချင်နေတာကိုးဗျ။
စေတနာရဲ့နောက်ကွယ်က သူရဲ့ စိတ်အမှန်က သူဟာထင်ပေါ်ချင်နေသူဆိုတာ ဒီနေရာမှာပြလိုက်တာပဲ။
Nov 18, 2008, 1:14:00 AM
ခါဂျီး၊ ခါဂွေး၊ ဂါးနီ တဲ့။ သောက်တလွဲ လို့ မဖြေလိုက်တာ ကံကောင်းပဲ။
အင်း. ကိုပေါတို့ ပြောသလို နည်းနည်းလေးတော့ မလွဲပါစေနဲ့။ အကုန် သောက်တလွဲ ဖြစ်ကုန်မယ်။ :)
Nov 18, 2008, 1:28:00 AM
အဲဒါ ယုံကြည်မှုကို အလွဲသုံးစား လုပ်လိုက်တာပဲ။
အဲဒီလိုမျိုး ရှေ့ကလူတွေ မဟုတ်တာ လုပ်သွားသမျှ နောင်လာ နောက်သားတွေက ခံကြရတာ။ ဗမာဆို မယုံတာတို့။ စည်းကမ်းပိုတင်းကျပ် ခံရတာတို့။
ဒီလိုလုပ်ခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက် နောက်ဆက်တွဲအနေနနဲ့ များပြားလှစွာသော စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတွေနဲ့ ဒီ့ထက် ဒီ ပိုပြီး ကျပ်သွား နိုင်သလို တကယ့်စည်းကမ်းကို နားမလည်ပါးမလည်နဲ့ အူကြောင်ကြောင် ကရင်အကိုကြီးလဲ လက်တွေ့မှာ ဒုက္ခရောက်နိုင်ပါတယ်။
ဒီနည်းကို အဟုတ်ကြီးလုပ်ပြီး ဖြန့်ဝေ၊ မှတ်တဲ့သူက မှတ်၊ တဆင့် ပြန်ဖြန့် ... ဒီလိုဆိုရင် ... မမှန်မကန် လိမ်ညာ လှည့်စား လက်တလုံးခြား လုပ်တဲ့ အကျင့်ကြီး ပိုပြီး ပြန့်ပွားသွားတော့မယ်။
ဥာဏ်ရောင်စုံရှိတိုင်းလဲ ကောင်းတဲ့နေရာလေးတွေမှာသာ အသုံးချစေချင်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ၁% လောက်ဖြစ်ဖြစ် သိပ်ထိရောက်စေချင်တဲ့ စာရေးဆရာမျိုးတွေ ပိုသတိပြုသင့်တယ် ထင်တာပဲ။
Nov 18, 2008, 1:44:00 AM
Nov 18, 2008, 3:19:00 AM
မိုက်တယ် အကိုရေ တော်တော်ကို ရယ်ရတယ် ဒါပေမဲ့ ကိုပေါပြောသွားတာတော့ မှန်ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ဒါဟာလဲ အချိန်အခါအရ ဖြစ်သွားတာနေမှာပါ ကျနော် ပထမ ကော့မန့်လေးကို ပြန်ဖျက်မိသွားတယ်း)
Nov 18, 2008, 3:22:00 AM
Ko Klo, It just occurred to me that one of my friends had translated the driver's manual into Burmese. Maybe you could do the same for CA driver's manual and put it online. You can talk to the department and they would be willing to help you to make the translation possible. It might be helpful for the Burmese, whose English is not very good, to study for the test. Justathought!
Nov 18, 2008, 6:07:00 AM
ခါဂျီး ခါခွေး ဂါးနီ ဆိုကတည်းက ဘာလဲလို့ စ်ိတ်ဝင်စားပြီး လာဖတ်တာ ... ဟီး ကောင်းလိုက်တဲ့ပို့စ်။
Nov 18, 2008, 9:34:00 AM
မှတ်ချက်။ ။ စာဖြစ်သောကြောင့် စာလိုပဲ ဖတ်သွားပါတယ်။
Nov 18, 2008, 9:37:00 AM
အင်း .. အပေါ်က ကွန်မန့်တွေကိုတော့ လေးစားပါတယ်။် ရိုးသားမှုကိုတန်ဖိုးထားစေချင်တာ... မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခြေအနေတွေက အဲလောက် ရိုးသားနေရင် ထမင်းတောင် စားလို့မရတဲ့ အခြေအနေမျိူးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာ ... သိရင်တော့ ဒီလိုပြောနိုင်မယ်မထင်ဘူး။ အမေရိကန် နိုင်ငံမှာ တချို့ တောနယ်တွေမှာ Public transport မကောင်းတဲ့ နယ်တွေရှိပါတယ် .. Bus ကားဆို တနာရီ လောက်မှ တစီးလာတာပါ အဲညဖက်ဆိုလည်း bus တွေက မဆွဲတော့တဲ့ နယ်တွေရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ဈေးဝယ်၊ ကျောင်းသွား၊ ဆေးရုံသွား ဒါတွေက အစ ကုန်ကုန်ပြောရင် မုန့် စားချင်ရင်တောင်မှ ၁၅ မိနစ်လောက် ဝေးတဲ့ ခရီးကို သွားပြီးစားရတဲ့နေရာတွေရှိပါတယ်။ နောက်တခုက ဒုက္ခသည် အဖြစ်ရောက်ရှိလာတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ တော်တော်များများဟာ အင်္ဂလိပ်လိုမပြောနဲ့ မြန်မာလိုတောင်ကောင်းကောင်းမတတ်ကျပါဘူး။ သူတို့တွေထဲမှာ ရန်ကုန်တောင် မရောက်ဘူးခဲ့တဲ့သူတွေအများကြီးပါ။ သူတို့တွေဟာ မဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့လူနေမှုအဆင့် တခုကနေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ လူနေမှု အဆင့်တခုကို ဗြုန်းကနဲ ပစ်ချသလိုရောက်လာခဲ့ကျတာပါ။ အဲ့ဒီအတွက် သူတို့တွေဟာ သူတို့နေထိုင်သွားရမဲ့ အရပ်ဒေသမှာ ရှင်သန်ရှုန်းကန်ဖို့ ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုကြိုးစားတဲ့ အခါမှာ အဓိက လိုအပ်ချက်ကတော့ “ကား” မောင်းတတ်ဖို့ပါ “ကား” မောင်းလိုင်စင်ရဖို့ပါ။ လိုင်စင် မရှိရင် ထမင်းစားဖို့ဈေးဝယ်ဖို့ ကျောင်းသွားဖို့ အခက်ခဲပေါင်းများစွာ အပြင် ရေခဲတမျှချမ်းအေးတဲ့ရာသီဥတုထဲမှာ bus စောင့်စီးရတဲ့ဒုက္ခ၊ အခန့်မသင့်ရင် bus စောင့်နေတုန်း လုယက်တာတောင် ခံရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဒီလို ဒုက္ခမျိုးစုံကြောင့် လိုင်စင်ရဖို့ဟာ သူတို့အတွက်အရေးပါဆုံးပါ။ ခုလိုရေးပြတာလည်း ဘယ်လိုအကြောင်းတွေကြောင့် လိုင်စင်ဖြေတဲ့ အခါမှာမရိုးသားတဲ့နည်းလမ်းကို ဘာကြောင့်သုံးမိတယ်ဆိုတာကို နားလည်စေချင်လို့ပါ။ အပေါ်ကပြောခဲ့သူ ညီကိုမောင်နှမ များကို အတိုက်အခံလုပ်ခြင်းမဟုတ်သလို၊ ကိုကလိုစေးထူးနှင့်လည်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အရသိကျွမ်းခြင်းမရှိပါ။
Nov 18, 2008, 10:47:00 AM
ဖတ်သွားတယ်။ ထုံးစံအတိုင်းရသတစ်ခုတော့ခံစားရပါတယ်။ တွေးတတ်ရင်တော့အများကြီးပဲ။ သတ္တ၀ါအပေါင်းဘေးရန်ကင်းရှင်းကြပါစေ။
Nov 18, 2008, 1:16:00 PM
ရော် ..ခက်ပါဘိ ယောနသံစင်ရော်
ကလိုစေးထူး မှာ မိန်းမရှိတယ်ဆိုတာ ညည်းတို့လို့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေအားလုံးသိစေချင်တယ်။ သူက သူ့မိန်းမခင်ထွေးရီအကြောင်း ဘယ်တော့မှ မပြောဘူး။ သူ့ကိုယ်သူလူပျိုပုံစံ အမြဲဖမ်းနေတာ။
နောက်မှ ကျုပ် အဆိုးမဆိုနဲ့။
အခြေအနေဆိုတာ လက်ခံလို့ရပေမဲ့ သူတို့တွေနားလည်လာအောင် တိုးတက်မှုရှိလာအောင် လမ်းပြပေးရမှာ ကူညီနေတဲ့သူမှာ တစိတ်တပိုင်းတာဝန်ရှိတယ်။
ကောင်းပီ အမေရိကန်လိုနေရာမှာ ဒါတွေရှိတယ်။ ငါတို့ အားလုံးနားလည်တယ်။ ဒါဆို ဘဝမှာ ဘယ်လိုနေထိုင်ရမယ်ဆိုတာ သူတို့သိပီ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ ဗမာစကားမတတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ အခုသူတို့နေတာ ဗမာပြည်မဟုတ်ဘူး။ ဒါဆို ရှင်းနေတာပဲ သူတို့တသက်လုံး ကိုယ့်အားကိုယ် ကိုးသွားနိုင်ဖို့ လမ်းညွှန်ပေးဖို့ လိုလာပီဆိုတာတော့
ညည်း သဘောပေါက်မယ်ထင်တယ်။ညည်းသာဆိုရင်ရော တသက်လုံးသူများကို အားကိုးနေမယ်မမထင်ဘူး။
မသိတာကို သိအောင် နားလည်လာအောင် ပြုပြင်ပေးရမှာ အသိဥာဏ်ရှိသူတွေအလုပ်လေ။ အထူးသဖြင့် ကလိုစေးထူးက စေတနာထားပီး စာတွေ ရေးတယ်။ အတွေးတွေ မြင့်တင်ပေးနေတဲ့သူဆို သူ့မှာ ဒီလို မြှင့်တင်ပေးလို စိတ်မျိုး ရှိကိုရှိရမှာ ။ သူ တခါမှ လုပ်ပုံမရဘူး။
ကိုပေါနဲ့ မောင် တင်ပြသွားတာတွေ အားလုံး မှန်တယ်။
အမှန်ကို မြင်တတ်ပါစေ။ မျက်စိတမွှေးမကြည့်ပါနဲ့။ မျက်စိတဆုံးကြည့်ပါအေ။
Nov 18, 2008, 3:49:00 PM
Nov 18, 2008, 5:19:00 PM
It wasavery good post on the surface. However, atadeeper level, it made me feel sad and worried because the right talent was used in the wrong way.
I agree with what Ko Paw, Maung and LwinMoe have already pointed out. Someone with genuine good will like you could doalot better than this.
Nonetheless, thank you for sharing it and letting us express our views here.
PS: only corrected some typos :)
Nov 18, 2008, 5:23:00 PM
ကိုစေးထူးတို့က အကြံပိုင်တယ်ဗျ။ ကကြီး သောက်တလွဲ၊ ခခွေး ဟုတ်နေပြီ.... ဟာဟ
Nov 18, 2008, 8:52:00 PM
Nov 18, 2008, 10:38:00 PM
ခါဂျီး ၊ခါဂွေး၊ ခါနီး သောက်တလွဲ ဟုတ်နေပြီ
Nov 18, 2008, 11:03:00 PM
ကိုစေးထူးရေ… ရယ်လဲရယ်ရသလို စိတ်ဝင်စားစရာလဲ ကောင်းပါတယ်…
အဲဒီမှာရောက်နေတဲ့ မြန်မာတွေရဲ့ ဘ၀ကို သိခွင့်ရတာပေါ့…
တချို့ က စာမေးပွဲဆိုတဲ့ pressure ကြောင့် အရင်က သိထားတာတွေတောင် မေ့သွားတတ်ကြတယ်… လူမျိုးခြားတွေ စစ်တဲ့ စာမေးပွဲဆို ပိုဆိုးမှာပေါ့…
ကိုစေးထူးရေ… ကိုကရင်ကြီးကို စာပြန်ကျေအောင် လုပ်ပြီးမှ ကားမောင်းလို့ ပြောလိုက်ပါဦး… ဘယ်ဘာသာစကားနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် အဓိကက ယဉ်စည်းကမ်းသိဖို့ လိုတာပဲလေ…
Nov 19, 2008, 12:11:00 AM
တောမှာမောင်းတာဆိုရင်တော့ ကိစ္စ မရှိပါဘူး။ မြို့မှာ မောင်းလို့ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ရင်တော့ ဘာသာပြန်ဆရာ တာဝန်ပဲနော်..
Nov 23, 2008, 5:08:00 AM
Yes, I agree with Ko Paw and Ko Lwin Moe. This isakind of cheating and should not be encouraged. Even if the Karen Ako-Gyi is not fluent in English, he should have the required knowledge of driving. (If he does not have, it is too dangerous to put him behind the wheels.) If he has the required knowledge, has should be able to give correct answers himself if the questions are translated for him.
To Ko Bow Daw ... You'd better not do personal attacks and bealittle more positive in your comments.
tint: အကိုကျွန်တော်မြင်သလို မြင်လားမသိ
2:17 PM့ he: ဘယ်နေရာလည်း
2:18 PM tint: ဟုတ် ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော့ ဗမာပြည်သားချင်း ကူညီတယ်
2:19 PM ၁)သူဟာ စကားပြန်အနေနဲ့ ယူထားတဲ့ စည်းကမ်းကို ဖေါက်ဖျက်တယ်
၂)တကယ်ကားမောင်းဘို့ အရည်အချင်းမမီတဲ့ လူတယောက်ကို လမ်းပေါ်တင်ပေးလိုက်တယ်
tint: အဲလူဘဲဖြစ်ဖြစ် နောက်တဦးဘဲဖြစ်ဖြစ်
2:20 PM ကားတိုက်သေရင် သူ့ တာဝန်ဗျ
၃)ဗမာပြည်က လာတဲ့ ကောင်တွေကွာ
2:21 PM ၄) နိုင်ငံတခုပေါ့နော်
USA က သူတို့ ကို စေတနာနဲ့ လက်ခံတယ်
အဲနိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေကို မလိုက်နာတာ
၅) ဒါကို ဘလော့တင်ဂုဏ်ယူတယ်
2:22 PM ဗမာ တွေ ငါ့လို လုပ်ကွလို့ 
tint: ဗမာတွေအကုန်ကို စော်ကားတာလား စာရိတ္တဖျက်တာလား
ဒါကို ကွန်မင့် ဘောက်စ်ထဲ ထည့်ရုံပါဘဲ
2:23 PM ဟဲဟဲ
2:24 PM နိုင်ငံတခုရောက်နေတဲ့ဗမာဆရာဝန်ဟာ ဗမာမတယောက်ကို ကလေးဖျက်ပေးရင်
အကို တို့ အဲဆရာဝန်ကို
Nov 30, 2008, 11:37:00 AM